Ma ciyaari karaa AVI on iPad? Oo aad rabto inaad hesho ciyaaryahan weyn AVI u iPad in laydin sii ciyaari files AVI qalabka habsami leh? Dhab ahaantii, ugu files AVI aan la garan karaa kiniinka. Sida laga soo xigtay Details qalab ee, iPad taageertaa AVI files la xadeyn soo socda.
Maalmahan, ee suuqa, aqlabiyadda ah ee files AVI aan encoded la Motion jpeg. Sidaas, waxaad u badan tahay badan files AVI in aan noqon kartaa mid taageero iPad. Si aad u ciyaaro AVI on iPad nooc kasta, ciyaaryahanka AVI ah u iPad waa xoog leh lagula taliyey. Iyada oo kaliya hal click, aad u bedeli karaan faylasha AVI si habboon qalabka iPad ugu fiican. Looma baahna in la sameeyo goobaha kasta.
Qeybta 1: Best AVI Player u iPad
Qeybta 2: AVI Player Bilaashka ah ee iPad
Qeybta 3: Online AVI Player u iPad
Qeybta 1: Hel Best & Professional AVI Player u iPad
Professional AVI Player: Beddelaan AVI in iPad qaabab socon sida M4V, MOV iyo MP4 for si fudud loo maqli karo ee videos.
Multiple Qalabka Presets: Beddelaan AVI in presets kala duwan sida qalabka iPhone, iPad iyo Android.
Edit Videos: Edit AVI videos by falinjeeerka, croping, isagoo intaa ku daray saamaynta ama Cinwaan, iwm
Speed ​​Lightening: The xawaaraha diinta degdeg ah ka dhigaya diinta ka badan dhakhso ah oo hufan.
Features dheeraad ah: Waxaad u isticmaali kartaa si ay u gubaan video inay DVD, download videos ka goobaha la wadaago video badan oo ku dar metadata in filimada Lugood.
Sida loo isticmaalo AVI ka Player u iPad
Ka dib markii la rakibey, kaliya abuurtaan app this ka dibna dajiyaan files AVI si loogu badalo. Riix ah "Add Files" button ee geeska bidix ee kore ee suuqa kala barnaamijka. Browse your computer dooro faylasha aad rabto in aad ku darto. Or, sidoo kale si toos ah aad furi kartid gal si aad u ogaato faylasha AVI jecel yahay oo markaa kuwaa oo in barnaamijkan.
2. Dooro sida qaab wax soo saarka iPad
Fur ay suuqa kala qaab saarka midkood gujinaya liiska hoos-hoos qaab ama gujinaya image qaab ee guddiga Qaabka Output ah. Markaas kaliya dooro nooca qalabka aad rabto in aad ka, "Device" ayuu> "Apple" category. App Tani waxaa ku jira ku dhowaad dhammaan noocyada iPad, sida iPad 4, iPad mini iwm
3. Start AVI in ay diinta ka iPad
Just qabtaan AVI in ay diinta ka iPad adigoo riixaya "Beddelaan" button ee geeska gacanta midigta hoose ee AVI si Converter iPad. Xowliga diinta video waa si dhakhso ah. Halka A ka dib, app idinka caawin doono inaad ku dhameysan dhammaan hawlahan. Ka dib markii diinta, saxaafadda "Folder Open" badhanka hoose ee app aad u hubiso oo dhan waxaa ku badaley files.
Ka dib markii diinta, aad jiidi karaan wax soo saarka, kuwaas oo files ka gal maktabadda Lugood ee. Markaasuu iyaga u hagaagsan in aad iPad in meel kasta iyo mar walba ciyaaro.
Qeybta 2: AVI Player Bilaashka ah ee iPad - Free Beddelaan videos in la taageero by iPad
# 1. Free AVI Player u iPad: Wondershare Video Converter Free - Kuweeda videos in qaabka la jaan qaada iPad
Waxaa laguu oggol yahay in aad isticmaasho ciyaaryahanka AVI lacag la'aan ah iPad si loogu badalo dhamaan video iyo maqal ah qaabab, xaalkaa videos, iyo soo bixi videos ka YouTube.
: Pro ciyaaryahan AVI gebi ahaanba bilaash ah u iPad, user saaxiibtinimo interface
1. Waxaad isticmaali kartaa si loogu badalo oo dhan videos caadiga ah sida AVI, MP4, MOV, iyo in ka badan.
2. Waxaad haysataa 10 beddelaad ee 30X ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta.
r 3. Ma jiraan wax presets avaliable u diinta.
Qeybta 3: Beddelaan AVI in iPad u Radidiyaha (Online)
Sida loo Beddelaan DAT in MP4, wmv, MOV (QuickTime)
> Resource > Beddelaan > AVI Player u iPad: Sida loo Play AVI on iPad